Bit By Bit - Fananganana fiaraha-miasa betsaka - 5.4.3 Famaranana
Azo atao ny fanangonana tahirin-kevitra, ary amin'ny hoavy dia mety hampiditra teknolojia sy fandraisana anjaran'ny tsirairay.
Rehefa manaporofo ny eBird, dia azo ampiasaina amin'ny fikarohana siantifika ny fanangonana tahiry. Ankoatra izany, ny PhotoCity dia maneho fa ny olana mifandraika amin'ny famolavolana sy ny kalitaon'ny data dia azo havaozina. Ahoana no ahafahan'ny fizarana angon-drakitra miasa amin'ny fikarohana ara-tsosialy? Ohatra iray avy amin'ny asan'i Susan Watkins sy ny mpiara-miasa ao amin'ny Tetikasa Malawi Journals (Watkins and Swidler 2009; Kaler, Watkins, and Angotti 2015) . Ao anatin'ity tetikasa ity, 22 ireo mponina ao an-toerana antsoina hoe "mpanao gazety" no manangona "seha-pifanakalozan-kevitra" izay nanoratra amin'ny an-tsipiriany ny resadresaka noraisin'izy ireo mikasika ny SIDA amin'ny fiainana andavanandron'ny olon-tsotra (tamin'ny fotoana nanombohan'ny tetikasa, manodidina ny 15% Tao Malawi dia voan'ny VIH (Bello, Chipeta, and Aberle-Grasse 2006) ). Noho ny sata napetrak'izy ireo, ireo mpanao gazety ireo dia afaka nanafatra ny fifampiresahana izay mety tsy ho zakan'i Watkins sy ireo mpiara-miasa aminy amin'ny fikarakarana tandrefana (izaho dia hifanakalo hevitra momba ny etika eto amin'ity toko ity rehefa manolotra torohevitra momba ny fananganana ny tetikasam-piarahamoninao) . Ny angona avy ao amin'ny Tetikasa Malawi Journals dia nitarika tranga manan-danja maro. Ohatra, talohan'ny nanombohan'ny tetikasa, maro ireo vahiny no nino fa misy ny fahanginana momba ny SIDA any Afrika atsimon'i Sahara, saingy nampiseho ny gazetibok'ireo resadresaka fa tsy izany no nitranga: ny mpanao gazety dia naheno adihevitra an-jatony momba ny lohahevitra, any amin'ny toerana maro samihafa fandevenana, bara, ary fiangonana. Ankoatra izany, ny toetoetran'ireo resadresaka ireo dia nanampy ny mpikaroka hahatakatra tsara ny sasany amin'ny fanoherana amin'ny fampiasana kapaoty; Ny fomba fomba fampiasana kapaoty dia voarafitra amin'ny hafatra momba ny fahasalamam-bahoaka dia tsy mifanaraka amin'ny fomba niadian-kevitra tao amin'ny fiainana andavanandro (Tavory and Swidler 2009) .
Mazava ho azy, toy ny angona avy amin'ny eBird, ny data avy amin'ny tetikasa Malawi Journals dia tsy tonga lafatra, olana iray nomanin'ny Detorna sy ny mpiara-miasa amin'ny antsipiriany. Ohatra, ny fifanakalozan-dresaka voarakitra dia tsy ohatr'ireo resadresaka rehetra azo atao. Voarara ny resaka momba ny SIDA kosa izy ireo. Raha ny momba ny kalitao, dia nino ireo mpikaroka fa mpanao gazety ambony kalitao ny mpanao gazety, araka ny asongadin'ny tsy firaharahiana ao amin'ny gazety sy ny gazety. Izany hoe, satria mpanao gazety ampy no nampiasaina tamin'ny sehatra madinidinika ary nifantoka tamin'ny lohahevitra manokana, azo natao ny nampiasa ny fanamafisana mba hanombanana sy hanamafisana ny kalitao. Ohatra, nisy mpiasa iray antsoina hoe "Stella" niseho imbetsaka tao amin'ny gazetin'ireo mpanao gazety efatra (Watkins and Swidler 2009) . Mba hanamafisana bebe kokoa ny fijerinao, ny tabilao 5.3 dia maneho ohatra hafa momba ny fanangonana tahirin-tserasera amin'ny fikarohana sosialy.
Tabilao 5.3: Examples of Projects Collective Data Distributed in Social Research
Fifanakalozan-kevitra mikasika ny VIH / SIDA any Malawi Watkins and Swidler (2009) ; Kaler, Watkins, and Angotti (2015)
Làlana miangona any Londres Purdam (2014)
Hetsika henjana any Congo Atsinanana Windt and Humphreys (2016)
Hetsika ara-toekarena any Nigeria sy Liberia Blumenstock, Keleher, and Reisinger (2016)
Fanaraha-maso ny gripa Noort et al. (2015)
Ireo ohatra rehetra voatanisa ato amin'ity fizarana ity dia nandray anjara mavitrika: ny mpanao gazety nandika ny resaka nifanaovany; Ireo vorona dia nampakatra ny lisitry ny vorona; na mpilalao nandefa sary. Ahoana anefa raha toa ka efa mahazatra ny fandraisana anjara ary tsy mitaky fahaizana manokana na fotoana hanaovana izany? Izany no fampanantenana omen'ny "fampandrenesana ny fandraisana anjara" na ny "fitoviana eo amin'ny olona." Ohatra, ny Pothole Patrol, tetik'asan'ny mpahay siansa ao amin'ny MIT, dia nitondra GPS fampiasa amin'ny GPS ho an'ny fiara fitaterana an-tariby fito ao an-tanànan'i Boston (Eriksson et al. 2008) . Noho ny fiarandalan'ny lakolosy iray dia mamoaka mari-pamantarana famantarana miavaka, ireo fitaovana ireo, rehefa napetraka ao anaty fiara fitaterana, dia afaka mamorona sarintany ao Boston. Mazava ho azy, tsy manara-dàlana ny fiarakaretsaka ny fiarakodia, saingy, raha omena tambatra ampy, dia mety hisy ny fandrakofana ampy hanomezana fanazavana momba ny ampahany betsaka amin'ny tanàna. Ny tombony faharoa amin'ny rafitra pasipika izay miankina amin'ny teknôlôjia dia ny hametrahana ny dingan'ny fampiroboroboana angona: raha ilaina ny fahaiza-manao handray anjara amin'ny eBird (satria mila mahafantatra tsara ireo karazam-borona ianao), tsy mitaky fahaizana manokana izany mandray anjara amin'ny Pothole Patrol.
Raha mandroso aho, dia mihevitra aho fa maro ny tetikasa fanangonana angon-drakitra dia hanomboka hampiasa ny fahafahan'ny finday izay efa nentin'ireo olona an'arivony manerana izao tontolo izao. Ireo finday ireo dia efa manana sanda lehibe maro ho an'ny fitiliana, toy ny mikrô, ny fakantsary, ny fitaovana GPS, ary ny famantaranandro. Ankoatra izany, manohana apps amin'ny antoko fahatelo izy ireo izay ahafahan'ny mpikaroka mifehy ny fametahana angona antonony. Farany, manana fifandraisana amin'ny aterineto izy ireo, izay ahafahan'izy ireo manala ny angona angon-dry zareo. Misy fanamby ara-teknika marobe, manomboka amin'ny famantaran-tsakafo tsy voafetra amin'ny fiainana andavanandro, saingy mety hitranga izany olana izany rehefa mandeha ny teknolojia. Ny olana mifandraika amin'ny tsiambaratelo sy ny etika, amin'ny lafiny iray, dia mety ho sarotra kokoa; Hiverina amin'ny fanontaniana momba ny fitsipi-pitondrantena aho rehefa manolotra torohevitra momba ny famolavolana ny fiarahamoninao.
Ao anatin'ireo tetikasa fananganana tahirin-kevitra, ireo mpilatsaka an- Efa nampiasaina tsara io fomba fanao io, ary ny fampiasana amin'ny ho avy dia mety ho voatery mamaha olana momba ny famafazana sy ny kalitao. Soa ihany, ireo tetikasa efa misy toy ny PhotoCity sy Pothole Patrol dia manolotra vahaolana amin'ireo olana ireo. Satria ny tetikasa bebe kokoa dia manararaotra ny teknôlôjia izay ahafahan'ny fandraisana anjara mavitrika sy mandalo, ny tetikasa fanangonana angon-drakitra dia tokony hampitombo haingana ny haavony, ka ahafahan'ny mpikaroka manangona tahirin-kevitra izay tsy misy fetrany fotsiny.